Umzi-mveliso weZiko lokuCoca-iZiko lokuCoca eTshayina abavelisi, ababoneleli
IFume Hood Series yokuKhupha iiGasi ezinobungozi
I-Fume hood sisixhobo sebhubhoratri esiqhelekileyo esisetyenziswa kwiilabhoratri ezifuna ukukhupha iigesi ezinobungozi, kwaye kufuneka zicocwe kwaye zikhutshwe ngexesha lovavanyo.
Itheyibhile Uhlobo lwe-Ultra-clean Workbench Series
Ibhentshi ecocekileyo luhlobo lwezixhobo zokucoca ezisetyenziswa kwindawo ecocekileyo.Ukusetyenziswa ngokufanelekileyo, isakhiwo esilula kunye nokusebenza okuphezulu.Isetyenziswa kakhulu kwi-electronics, i-instrumentation, ikhemesti, i-optics, inkcubeko yezicubu zezityalo, amaziko ophando lwenzululwazi kunye neebhubhoratri, njl.
Flow nkqo Ultra-ecocekileyo Workbench Series
Ethe tyaba kwaye nkqo kwiNjongo ezimbini ze-Ultra-clean Workbench Series
Uyilo olwenziwe ngumntu luthathela ingqalelo ngokupheleleyo iimfuno zabasebenzisi.Ngokwe-counterweight balanced structure, umnyango weglasi wokutyibilika wefestile yokusebenza unokubekwa ngokungqongqo, okwenza uvavanyo lube lula kwaye lube lula.
Biological Safety Khabhinethi Series Isiqingatha Exhaust
Ikhabhinethi yokhuseleko lwebhayoloji (BSC) luhlobo lwebhokisi yokucoca umoya isixhobo sokhuseleko olubi olunokuthintela amasuntswana athile ebhayoloji ayingozi okanye angaziwayo ekuchitheni ii-aerosols ngexesha lokusebenza kovavanyo.esetyenziswa ngokubanzi kuphando lwesayensi, ukufundisa, uvavanyo lwezonyango njl.njl.
Biological uKhuseleko lweKhabhinethi Series Exhaust ngokupheleleyo
Isetyenziswa ngokubanzi kuphando lwezenzululwazi, ukufundisa, uvavanyo lweklinikhi kunye nemveliso kwiinkalo ze-microbiology, i-biomedicine, ubunjineli bezofuzo, iimveliso zebhayoloji, njl njl. Isona sixhobo sokukhusela ukhuseleko kwinqanaba lokuqala lomqobo wokukhusela kwi-laboratory biosafety.